Ogaden News Agency (ONA) – Faracyada Dhadhaab Iyo Faafi Oo Kulmay Go’aamana Soosaaray.
Faracyada Dhadhaab Iyo Faafi Oo Kulmay Go’aamana Soosaaray.
Posted by Dulmane	/ October 28, 2016
Shalay oo ahayd maalinimo khamiisa taariikhduna kubeegnayd 27/10/16 waxaa xerada Qoxootiga Xagardheer ee Deegaanka Faafi kadhacay kulan ay isugu yimaadeen maamulada 3da xero ee xagardheer Ifo iyo Dhagaxley.
Kulanka oo ahaa mid sedexdii biloodba marlaqabto ayaa ah kulan lagaga arrinsado shaqooyinka iyo hawlaha halganka ee goobahaasi hadba wixii soo kordhana lagula socdo laguna Abuuro qorsheyoow cusub oo lagu hawlgalo mudada udhaxaysa labada kulan.
Kulanka waxaa kasoo qaybgalay maamulada faracyada, xubin Goledhexe ah iyo masuuliyiin kale oo JWXO katirsan
Kulanka waxaa lagasoo saaray go’aamo iyo talooyin waxku ool ah waxaana la isla meeldhigay lagana yool gaadhay Dhamaan qodobadii shirka loogutalagalay.
Gabagabadii iyo gunaanadkii ayaa lagudardaarmay in gabi ahaanba ladardar galiyo hawlaha halganka lagana foojignaado khatarta iyo khayaanada cadawga isla markaana laga faa’iidaysto marxalada cusub ee bariga Africa soo wajahday wuxuuna kulanku kusoo dhamaaday jawi dagan.